Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo dalka dib ugu soo laabtay – idalenews.com
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo dalka dib ugu soo laabtay
Guddoomiyaha Baarlamanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminyay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay dhowr maalmood booqasho ku joogeen dalka Turkiga.
Afhayeenka Baarlamanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxaa booqashadiisa Turkiga ku wehliyay xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya waxaana garoonka diyaarada Aadan Cadde saaka ku soo dhaweeyay wasiirro iyo xildhibaano.
Gudoomiyaha Baarlamanka oo gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kula hadlay saxaafada ayaa ka warbixiyay booqashadii uu ku tegay dalka Turkiga, wuxuuna tilmaamay in ay wadahadalo la yeesheen mas’uuliyiin ka tirsan dalkaasi islamarkaana ay isku afgarteen waxyaabo badan oo horumar ah.
Dib ugu soo laabashada guddoomiyaha baaralamaanka dalka ayaa waxaa ay timid maalin kadib markii uu baarlamaanka Soomaaliyeed hortagay khudbadna u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Khudbada ayuu madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen ammaanka iyo kulanka lagu wado inuu ka dhaco Talaadada magaalada London.
Daawo: Taksiile Mareykan Muslim ah oo diintiisa waxyeelo loogu geystey magaalada Virginia
Wadamada Britain iyo Imaaraadka Carabta oo labo malyan oo Pound ku bixinaya ka hortagga kufsiga haweenka Soomaaliyeed